थाहा खबर: आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रका कर्मचारी आन्दोलित, कार्यालयमा ८ दिनदेखि ताला
काठमाडौं : राष्ट्रिय देशकै एक मात्र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, कर्मचारीको व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्न नसक्दा अहिले ८ दिनदेखि ठप्प छ। चीन सरकारको सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत सञ्चालनमा रहेको केन्द्रमा करार कर्मचारीको नियुक्ति, तलब भत्ता र अनुसन्धानमै असर पर्ने गरी कार्यकारी अधिकृतको कार्यशैली देखीएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।
आफूहरूलाई करारमा नराखी स्थायी नियुक्तिको प्रकृयामा लैजानुपर्ने, ओएनएम सर्भे पछिको प्रगति कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा कर्मचारीलाई अवगत गराउनुपर्ने, सरकारको प्रचलित नियमअनुसार सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ४ महिनादेखि रोकिएको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, ४ महिनादेखि रोकिएको करार सम्झौता तुरुन्त गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर कर्मचारीले काम ठप्प पारेका हुन्।
कर्मचारी नियुक्ति गर्दा ३ महिने करार सम्झौताले आफूहरुलाई पटकपटक अन्तवार्ता दिनुपर्ने र नियुक्ति हुनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउनुपर्ने केन्द्रकी नायब सुब्बा अप्सरा अधिकारीले बताइन्। 'पटकपटक जतीजना कार्यकारी निर्देशक आउनुहुन्छ। वहाँहरु सबैलाई नयाँ कर्मचारी झैँ बनेर अन्तवार्ता दिएर नियुक्त हुनुपर्ने बाध्यता छ, यो हटाउनुपर्छ।' अधिकारीले भनिन्।
कर्मचारीहरुले पदीय भूमिका र अधिकार नदिइँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासोसमेत गरेका छन्। प्रशासनको पाउनुपर्ने अधिकार पनि पाइएको छैन। काम कसरी गर्न सकिन्छ र ? कार्यकारी निर्देशकले अधिकार नदिँदा अरु कर्मचारीको रिस मसँग आइपुग्छ।' प्रशासनिक फाँटकी शाखा अधिकृत रिता गौतमले भनिन्।
कार्यकारी अधिकृतले बजेट व्यवस्थापन र कर्मचारीसंग मैत्रीपुर्ण व्यवहार गर्न नसकेका कारण अनुसन्धानको काम नै प्रभावित भएको अनुसन्धान अधिकृत अनिलसिंह बस्नेतले बताए। 'गत बर्ष कुरिलोको अनुसन्धान ग¥यौँ, हिराको धुलोले क्यान्सरमा काम गर्छ भन्ने अनुसन्धान ग¥यौँ। हामीले गाउँघरको जडीबुटीका बारेमा परिक्षण र अनुसन्धान गर्‍यौँ। तर, नेपालमा हामीले बनस्पतीको डिएनए डाटाबेश भएर अनुसन्धान गर्‍यौँ तर यसरी हामीले गरेका अनुसन्धानहरु पेन्डिङ छन्। कहिले बजेट अभाव भनिन्छ, यहाँ भएका महंगा उपकरणहरुको उपयोग पनि हुन सकेको छैन' बस्नेतले भने।
बस्नेतले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सिद्धार्थ ठाकुर अनुसन्धान र कर्मचारीको समस्या समाधानका कुरामा बजेट अभावको कारण देखाउदै तर्किने गरेको बताए। कर्मचारीले ताला लगाएपछि निर्देशकले समन्वय र छलफलकोे पहल नगरेको कर्मचारीको भनाइ छ। आफ्ना मागहरु वेवास्ता गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुको चेतावनी छ। 'चैत २३ गते निर्देशक ज्यूसंग बसेर हाम्रा माग सुनाएका हौँ, उहाँले २८ गतेसम्म समाधान हुन्छ भन्नुभएको हो। तर त्यसपछि हामीसंग कुनै छलफलमा नै हुनुहुन्न।' अनुसन्धान अधिकृत रमेशराज पाध्यायले भने, 'यतिन्जेल तालामात्र लगाएर शान्त रुपमा आन्दोलन गरेका हौँ। अब पनि हाम्रा मागलाई वेवास्ता गरिए कडा आन्दोलनमा उत्रीन बाध्य हुनेछौँ।'
कर्मचारीको समस्या मेरो पनि समस्याः कार्यकारी निर्देशक ठाकुर
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. सिद्धार्थ ठाकुरले भने कर्मचारीको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागी निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएका छन्। 'आजैपनि मन्त्रालयमा यही समस्याबारे छलफल भएको हो। उहाँहरुको रोकिएको तलब छिट्टै आउँछ, मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्दै छ।' उनले भने।
केन्द्रमा ६३ जना नै करार कर्मचारी छन्। उनीहरुको करार सम्झौता मंसिरदेखी रोकिएको छ। तलव पाएका छैनन्। अघिल्ला वर्ष खाइपाइ आएको दशैँभत्ता र पोशाकभत्ता यसवर्ष पाएका छैनन्। कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले कर्मचारीका समस्या आफ्नो पनि समस्या भएको भन्दै आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरे। 'दुःख मलाई नी लागेको छ। कर्मचारी खुसी भएर काम गरे मलाई पनि सजिलो हो। समस्याबारे म पनि चिन्तित छु' उनले भने।
तलब निकासा हुन्छ, स्थायीत्वको प्रक्रियामा जान्नः स्वास्थ्य मन्त्रालय
राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र चीन सरकारको सहयोगमा आठ वर्षअघि निमार्ण भएको हो। त्रिभुवन विश्वबिद्यालयको ३० रोपनी जग्गामा ५४ करोड लागतमा निमार्ण भएको केन्द्रमा आयुर्वेद अस्पताल तालीम केन्द्र र अनुसन्धान भवन छन्। यो स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको सरकारी कार्यालय हो तर करार कर्मचारीका भरमा केन्द्र सञ्चालीत छ जसका कारण कर्मचारीहरुले समयमा तलव पाउदैनन्। कर्मचारी नियमावली अनुसारको सेवा सुविधा पाउँदैनन् र अनुसन्धान नै प्रभावित हुन्छ।
कर्मचारीले संस्था र कर्मचारी दुवैलाई स्थायीत्व दिन स्थायी नियुक्तिको प्रक्रियामा लैजान माग गरेका छन्। मागको पहिलो बुँदामा नै प्रष्ट रुपमा स्थायीत्वको बिषय उठान गरिएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कर्मचारी आन्दोलनको कारण तलब मात्र भएको भन्दै केही दिनमा तलब निकासा हुने जवाफ दिएको छ। 'उहाँहरुको आन्दोलन तलबका लागी बजेट नपुगेर रोकिएको हो, अब केही दिनमा नै बजेट निकासा हुन्छ।' मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठले कर्मचारीको स्थायीत्वको मागबारे भने कुनै एउटा कर्मचारीले आन्दोलन गर्दैमा स्थायी नहुने जवाफ दिए। कर्मचारीले स्वतः स्थाइ हुने माग नराखी स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखेको बारे बुझाएपछि श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वाधीक महत्वको बिषय भएको बताए। 'सरकारले प्रकृयामा लैजान्छ, त्यो हाम्रो प्राथमीकताको कुरा हो, कुनै एकजनाले आन्दोलन गर्दैमा कोही स्थायी हुँदैन, स्थायीको प्रकृयाका लागी नियमावली, ऐन, विनियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको छुट्टै प्रकृया हुन्छ, कार्यक्षेत्र हुन्छ। अहिले उहाँहरुले पैसा नपाएर हो त्यो हुन्छ' उनले भने।